June 8, 2020 – ျမန္မာသတင္းစံု
အိုက်တင်တွေမျိုးစုံလုပ်ပြနေတဲ့ သားလေးကိုကြည့်ပြီး ပီတိဖြစ်နေတဲ့ ဖေဖေမြင့်မြတ်
နိုင်ငံကျော်မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မြင့်မြတ်ကတော့ ပရိသတ်အချစ်တော်အနုပညာရှင်တွေထဲက တစ်ယောက်အပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ ပျော်ပျော်ရွှင်နေထိုင်တတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်း ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို အကောင်းဆုံးပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် အကောင်းဆုံးအကယ်ဒမီဆုကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်နဲ့ပိုင်ဆိုင်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မြတ်ဟာ အေးချမ်းသာယာတဲ့မိသားစုဘဝလေးကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားလေးတစ်ယောက်နဲ့အတူပိုင်ဆိုင်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ သူတို့မိသားစုလေးက မွန်ပြည်နယ်ကျိုက်ထိုမြို့ကို အလည်ရောက်ရှိနေပါတယ်။ သားဖြစ်သူမြတ်သူလေးကလည်း မြင့်မြတ်ရဲ့အနုပညာရှင်ညီအစ်ကိုမောင်နှတွေနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့သဲသဲလှုပ်ချစ်ခင်အားပေးမှုကို ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ မြတ်သူလေးက ဖခင်ဖြစ်သူမြင့်မြတ်ရဲ့အနုပညာသွေးအပြည့်ပါပြီး လက်ရှိမှာလည်း မိဘနှစ်ပါးကို အိုက်တင်တွေမျိုးစုံလုပ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းလေးကိုတော့ ” ပါးပါး မားမား ကိုအိုက်တင်လုပ် ပြနေတဲ့ Chit tone kyi Myat Thu “ဆိုပြီး မြင့်မြတ်ရဲ့မန်နေဂျာဖြစ်သူအကောင့်မှာ Read more
ထွန်းကိုကိုကတော့ မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပရိသတ်အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိထားသူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ဦးကျော်သူဦးဆောင်တဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်းကြီးမှာ နေ့တိုင်းနီးပါး ပရိဟိတအလုပ်တွေကိုဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်နေပြီး နာရေးကူညီမှုအသင်းကြီးကဖွဲစည်းထားတဲ့ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှာလည်း ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၇- ၆- ၂၀၂၀ ရက်နေ့မှာတော့ ထွန်းကိုကိုဟာ သူချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အတူ သန်လျင်မြို့ ဘုရားသုံးဆူအပိုင် ပိတုန်း(ပဒုန်း)လမ်းနေ အသက်(၈၇)နှစ် အဖိုးဦးအောင်နှင့် (၈၆)နှစ် အဖွားဒေါ်မြင့်တို့ ဇနီးမောင်နှံအား လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို တတ်နိုင်သလောက်ထောက်ပံ့လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲဒီအလှူအကြောင်းလေးကိုတော့ နတ်လူသာဓုခေါ်လို့ရအောင်”ဒီနေ့ ၇- ၆- ၂၀၂၀ ရက်နေ့မှာ ကျွန်တော်ထွန်းကိုကို နှင့်ထွန်းကိုကိုချစ်ကြသူများ၏ ကုသိုလ်အဖြစ် သန်လျင်မြို့ ဘုရားသုံးဆူအပိုင် Read more
စတိုးဆိုင္တစ္ဆိုင္မွာ အေႂကြေလးေတြထုတ္ပီး သားေလးကို ဖိနပ္ဝယ္ေပးခ်င္လို႔ ပါ “တဲ့ ဆင္းရဲသား အေဖ တစ္ေယာက္ ရဲ႕ ႀကီးမားလွတဲ့ ေမတၱာ…
” စတိုးဆိုင္တစ္ဆိုင္မွာ အေႂကြေလးေတြထုတ္ပီး သားေလးကို ဖိနပ္ဝယ္ေပးခ်င္လို႔ ပါ “တဲ့ ဆင္းရဲသား အေဖ တစ္ေယာက္ ရဲ႕ ႀကီးမားလွတဲ့ ေမတၱာ… ” အေႂကြေလးေတြစုပီး သားေလးကို ဖိနပ္ဝယ္ေပးခ်င္လို႔ ပါ “တဲ့ ဆင္းရဲသား အေဖ တစ္ေယာက္ ရဲ႕ ႀကီးမားလွတဲ့ ေမတၱာ… သားေလးကို ဖိနပ္ဝယ္ေပးခ်င္လို႔ အေႂကြေစ့ေလးေတြ ႏွစ္အၾကာႀကီး စုခဲ့တဲ့ ဆင္းရဲသား အေဖ့ေမတၱာဒီေခတ္ကာလႀကီး ထဲမွာ ဖိနပ္ေလး တစ္ရံ ဝယ္ဖို႔ ပိုက္ဆံကို ႏွစ္ခ်ီ စုရတယ္ ဆိုတဲ့ Read more
စတိုးဆိုင္တစ္ဆိုင္မွာ အေႂကြေလးေတြထုတ္ပီး သားေလးကို ဖိနပ္ဝယ္ေပးခ်င္လို႔ ပါ “တဲ့ ဆင္းရဲသား အေဖ တစ္ေယာက္ ရဲ႕ ႀကီးမားလွတဲ့ ေမတၱ
COVID ထိချက်ပြင်းလွန်းတဲ့အတွက် တကမ္ဘာလုံးက Normal ပြန်ဖြစ်သွားမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ချစ်သုဝေ
လတ်တလောကမ္ဘာအနှံဖြစ်ပွားနေသော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရောဂါဟာဆိုရင် မြန်မာနိုင်မှာလည်း ကူးဆက်ခံရသူ (၂၄၃)ဦးတောင်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ ပြည်သူတွေကလည်း ကာကွယ်တားစီးရေးနဲ့ကုသရေးလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေတို့ မိသားစုလေးဟာလည်း ကပ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ ထောက်ပံ့လှူဒါန်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ချစ်သုဝေက COVID ထိချက်ပြင်းလွန်းတဲ့အတွက် တကမ္ဘာလုံးက Normal ပြန်ဖြစ်သွားမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ မဖြစ်မနေ အပြင်ထွက်ရမယ့်လူတွေဟာ အပြင်ထွက်တဲ့အခါမှာဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေမလုပ်ကြတဲ့အကြောင်းကို သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေ ယခုလိုပဲပြောပြထားခဲ့ပါတယ်။ချစ်သုဝေကတော့ ” COVID ထိချက်ပြင်းလွန်းတဲ့အတွက် တကမ္ဘာလုံး Normal ပြန်မဖြစ်သွားပါဘူးနော် ဒါကြောင့် New normal life style Read more
နားထားရတဲ့အလုပ်လေးတွေ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်စလုပ်ဖို့အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတဲ့ ဖွေးဖွေး
ပရိသတ်အချစ်တော်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဖွေးဖွေးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရုပ်ရှင်လောကမှာ ပရိသတ်အားပေးမှုကိုအပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်ရရှိထားတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချောလေးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကိုလိုက်ပြီး ပိုင်နိုင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်လည်း အကောင်းဆုံးအကယ်ဒမီဆု(၃)ဆုကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်နဲ့ ဆွတ်ခူးရရှိထားသူတစ်ယောက်ပါ။ ဖွေးဖွေးကတော့ မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် ဟိတ်ဟန်မရှိဘဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနေထိုင်တတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေအချစ်ပိုနေရသူဆိုလည်း မမှားပါဘူးနော်။ လတ်တလောမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကူးစက်ရောဂါပိုးတွေကြောင့် အနုပညာအလုပ်တွေရပ်နားထားရတဲ့ ဖွေးဖွေးကတော့ မကြာခင်မှာ အလုပ်တွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လည်လုပ်ကိုင်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းကို အခုလိုပဲပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ ဖွေးဖွေးကတော့ “ နောက်လလောက်ဆို နားထားရတဲ့ အလုပ်လေးတွေ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်စလုပ်ဖို့ …. လှလှတော့ပြင်ထား ရမှာပေါ့ ”ဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့အတူ ဆံပင်စတိုင်အသစ်နဲ့ အရမ်းကို မိမိုက်နေတဲ့ Read more
လေးစားအားကျရတဲ့ လူမင်းဆီက သူ့တစ်သက် တစ်ခါမှဝယ်မဝတ်ဖူးတဲ့ စပို့စ်ရှပ်လေးလက်ဆောင်ရလို့ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ညီနန္ဒ
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင်ညီနန္ဒ ကတော့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားပေါင်းများစွာရိုက်ကူးခဲ့ပြီး အနုပညာလောကမှာနှစ်တွေအကြာကြီး ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာ ဆိုရင်လည်း ညီနန္ဒကအနုပညာလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကို ရရှိနေဆဲပါ။ညီနန္ဒကတော့ လတ်တလောမှာ စီးပွားရေးအနေနဲ့ လူမျိုးဘာသာမရွေးစားသုံးနိုင်တဲ့ကြက်သား(ဗမာကြက်)ထောပတ်ထမင်း ကိုရောင်းချနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ ညီနန္ဒက သူ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အားလုံးကအန်ကယ်လေးလို့ခေါ်တဲ့သရုပ်ဆောင်လူမင်းကို သူ့ရဲ့ထောပတ်ထမင်းနဲ့ သွားရောက်ကန်တော့ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို “ ထောပတ်ထမင်းသည်ကြီး ထောတဲ့နေ့ (4.6.20)…ကျွန်တော့ထောပတ်ထမင်း အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာတဲ့အချိန် ကျွန်တော်အလုပ်ချင်ဆုံးဆန္ဒက ကျွန်တော့ သင်ဆရာ မြင်ဆရာ ကြားဆရာတွေ၊ ကျွန်တော့ကို ကူညီစောင့်ရှောက်ခဲ့ကြတဲ့ ကျေးဇူးရှင်တွေကို အလှည့်ကျ အနည်းဆုံးတစ်ပတ်နှစ်ကြိမ် ကျွန်တော့ထောပတ်ထမင်းနဲ့ လိုက်ကန်တော့ချင်တာပါ…🙏🙏🙏ပြီးခဲ့တဲ့ Read more
ယနေ့မှာကျရောက်တဲ့ အေးမြတ်သူရဲ့မွေးနေ့အတွက် ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ဆွမ်းချိုင့်ပို့ပြီး အလှူငွေများလည်း လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ညီညီမောင်
ပရိသတ်ကြီးရေ ညီညီမောင်(စမ်းချောင်း)ကတော့ မိတ်ကပ်ဖန်တီးရှင်လောကမှာ အောင်မြင်မှုများစွာရရှိထားပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကြောင့် အခုဆိုရင်တော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေပါရိုက်ကူးနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ညီညီမောင်ကတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ ပျော်ပျော်နေတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် လည်း ပရိသတ်တွေအချစ်ပိုနေရသူဆိုလည်း မမှားပါဘူးနော်..။ ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ ညီညီမောင်က အလုပ်တွေအတူတူလုပ်ပြီး မိသားစုလို ရင်းနှီးချစ်ခင်ရတဲ့ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အေးမြတ်သူရဲ့မွေးနေ့အတွက် ဘုန်းကြီးကျောင်းဆွမ်းချိုင့်ပို့၊ ဝတ္ထုငွေတွေ လှူဒါန်းပေးပြီး ကုသိုလ်ယူပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။အဆိုပါအလှူလေးကိုတော့ ညီညီမောင်က သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ အခုလိုပဲမျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။ ညီညီမောင်ကတော့ “Happy birthday အကယ်ဒမီ အေးမြတ်သူ ❤️ချစ်သော မမြတ်လေး နေ့ရက်တိုင်း စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပါစေ❤️ယနေ့ကျရောက်သော မမြတ်လေးမွေးနေ့အတွက် ဘုန်ကြီးကျောင်း ဆွမ်းချိုင့် Read more
ချစ်သူကောင်မလေးကို ဆက်ပြီးသည်းမခံနိုင်တော့လို့ လမ်းခွဲလိုက်ပါပြီဆိုတဲ့ ရဲနောင်
Myanmar Idol Season(2)ရဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ရဲနောင်ကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်..။ သူဟာ ပြိုင်ပွဲပြီးသွားကတည်းက ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုတွေကို ရရှိခဲ့ပြီး အခုဆိုရင်အောင်မြင်နေတဲ့ အဆိုတော်တစ်ဦးအဖြစ် အနုပညာလမ်းကြောင်းကို လျှောက်လှမ်းနေသူပဲဖြစ်ပါတယ်..။ ရဲနောင်က အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ပရိသတ်တွေ အားကျစရာကောင်းလောက်တဲ့ အချစ်ရေးလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ သူတို့ချစ်သူနှစ်ဦးဟာ ဆက်ပြီးသည်းမခံနိုင်တော့လို့ လမ်းခွဲလိုက်ပါပီဆိုတဲ့အကြောင်းကို ရဲနောင်က သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာ ရေးသားဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအကြောင်းလေးကိုတော့ ” သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ ဒီနေ့လမ်းခွဲလိုက်ပါပီ ကျွန်တော့်နောက်ကွယ်မှာ နောက်တစ်ယောက်နဲ့ ဖောက်ပြန်နေတာပါ . .ဆက်ပီးသည်းမခံနိုင်တော့ပါဘူး ..လက်ပူးလက်ကြပ် ပုံနဲ့တကွ မိပါတယ် ..ပိုစိတ်နာတာက Read more
နိုင်းနိုင်းနဲ့ ဖူးဖူးတို့ မောင်နှမကို ငယ်ငယ်တုန်းကဘိုကျခဲ့တဲ့ အမှတ်တရလေးတွေကို ပြောပြလာတဲ့ အောင်မင်းခန့်
ပရိသတ်ကြီးရေ ယောကျာ်းပီသတဲ့အမိုက်စားဘော်ဒီကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့သဲသဲလှုပ်အားပေးခြင်းကို ခံနေရတဲ့ အောင်မင်းခန့်ကတော့ MRTV4 ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေက တစ်ဆင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အောင်မင်းခန့်ကတော့ ကာရိုက်တာတိုင်းကို ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်သူတစ်ဦးဆိုလဲ မမှားပါဘူးနော်..။ အောင်မင်ခန့်ကတော့ အခုဆိုရင် ဇာတ်လမ်းတွဲတွေသာမက ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ နိုင်းနိုင်းနဲ့ဖူးဖူးတို့နဲ့ လည်း မောင်နှမတော်စပ်သူ တစ်ဦးပါ။အခုဆိုရင်တော့ အောင်မင်းခန့် က နိုင်းနိုင်းတို့မောင်နှမကို ငယ်ငယ်တုန်းက ဘိုကျခဲ့တဲ့ အမှတ်တရလေးတွေကို အခုလိုပဲပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ အောင်မင်းခန့်ကတော့ ” ငယ်ငယ်တုန်းကလဲ အိမ်မှာသွားအိပ်တယ်ဘိုကျတယ်ခုကြီးလာတော့လဲ အိမ်သစ်ကြီးမှာ ဘိုသွားကျမယ်ဟီးဟီး ” ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့အတူ မောငနှမသုံးယောက်အတူရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံရိပ်လေးကို သူ့ရဲ့လူမှု့ကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအတွက် အောင်မင်းခန့်တို့ Read more